China Mitsubishi Q170MCPU-S1 Machine Diaper Baby 600 pcs / min Na-agụta Ndị na-emepụta Speed ​​na ndị na-eweta ya | GACHN
Akpaaka / akwụkwọ ntuziaka
Na akpaghị aka
Bọtịnụ, Circuit Breaker, Onye na-akpọtụrụ, Relay, Thermostat, Ike ọkụ na ihe ndị ọzọ Schneider, Omron ma ọ bụ Honeywell
Njikwa mmemme / mmegharị PLC Mitsubishi Q170MCPU-S1
Nleba Anya Nleba) Q52B + QX41-S1 + QY41P
HMI 10.4 Ihu mmetụ nke agba Mitsubishi GT2310-VTBA
Igwe eletriki foto, eriri ọkụ, eriri na agba Omron, SICK, OPTEX ma ọ bụ ọkọlọtọ
Sistek na-anya ụgbọala Mitsubishi MR-J4B
Servo moto Mitsubishi HG-KR & SR
Sistemụ Njikwa Ọkụ Omron
Kaadị akwọ ụgbọ ala PLC emebere onwe ya, ha niile na-eji elektrọnik eleta batara
Inggụ na Speedgba Ọsọ: kwụsie ike na 550pcs / min, max na-arụ ọrụ ≤600pcs / min.The mmepụta ihe dabere na ọsọ igwe na-eburu ya, yana njikwa ngwa ngwa: 25-45pcs, otu ihe nkwụghachi arụ ọrụ bụ oge 15 / min; 10-24pcs, otu nguzosi ike na-arụ ọrụ bụ 20time / min.
Onweghị ihe ọghọm dị na ngwa a, nke kwekọrọ n'ụkpụrụ nchekwa mba dị mkpa.
Ziri ezi ịkpọtụrụ otu mpempe akwụkwọ mgbe mkpochara akwa diaper ma ọ bụ ndị na-emepụta akwa diaper, enweghị ọnọdụ nke izipu ma ọ bụ obere iji zipu ngwaahịa n'ime akwukwo agụta.
Mgbe otu n'ime nkwakọ ngwaahịa ahụ nwere ntụpọ, n'ọtụtụ nke ike nke usoro mmepụta ọsọ ọsọ belata na ntinye akwụkwọ ntuziaka, ntụgharị aka gaa na ntinye aka, hụ na enwere ike ịga n'ihu ịkwado pads niile, ma ọ bụrụ na usoro ahịrị mmepụta ọsọ ọsọ enweghị ike. belata, a ga - ewepu ihe ndị nwere ogologo.
Sistemụ eletriki dị na mkpa GB / T5226.1-2002 dị mkpa.
Na-arụ ọrụ kwụ ọtọ, na enweghị mmebi nke akpa dị n'ime ya mgbe ị na-akwali.
Enwere ike idozi mmemme na-esochi ihuenyo mmetụ ahụ, ma kwụsie ike nke ọnọdụ na-esote, iji hụ na arụ ọrụ nke isi na-akwali.
full servo nwa diaper igwe,
Nke gara aga: Ngwakọta zuru oke na-ewulite diaper nwa na igwe eji etinye ya
Osote: Oru oma Servo na Baby Diaper packaging Machine Rolling Film bag
Full servo Baby Diaper Machine okenye sere elu pa ...
Ngwaọrụ Baby Diaper Baby / Baby dia ...
Akpaaka na na akpaaka Baby Diaper stacking ...